Sararawwan kornyoo gosa afurtuu jira:
Waltawaa(geengoo digirii-90 ni jalataa)
Sarara (lama jallachuu)
Yeroo kornyoo cuqaastuu fi qaree hantuuttee keetii wanta guutame irra sochooftu, yookan moggaa wanta hin guutamnee, qabxiiwwan cuftiini mul'atu. Qaphxiin bakka sarara kornyoo walqabsiisuu dandeesudha. Yoo barbaaddee, TuqaaCuftii wantoodhaaf jedhama.
Sarara kornyoo kaasuuf wanta irratti tuqaa cuftii gara qabxiitti cuqaasi. Wanta biraa irratti harkisiiti, ittaansuudhaan gadhiisi. Dabalataaniis iddoo galmee kee duwwaatti harkisuu fi cuqaasuu ni dandeessa. Dhumni kornyoo wal-hinqabnnee bakkii garagaraatti harkistutti. Kornyoo garagar baasuuf, xumura sarara kornyoo gara argama gargaagara lamaan keessaa gara tookkotti harkisi.
Kornyoo kofa digrii-90n jallatu tokko yookin isaa ol kaasa. Qabxii cuftii wantaa irratti cuqaasi gara tuqaa cuftii ittaanutti gadhiisi.
Kornyoo Xiyyaan Jalqabu
Kornyoo kofa digrii-90n jallatu tokko yookin isaa ol waliin jallatuu fi xiyyaa qabxii xumuraa kaasa. Tuqaa cuftii wantaa irratti cuqaasi gara tuqaa cuftii wanta biroo irratti harkisii ittaansuun gadhiisi.
Kornyoo Xiyyaa Waliinii Xumuramu
Kornyoo kofa digrii-90n tokko yookan isaa ol waliin jallatuu fi xiyyoota qabxii xumuraa lamaanii kaasa. Tuqaa cuftii wantaa irratti cuqaasi gara tuqaa cuftii wanta biroo irratti harkisii ittaansuun gadhiisi.
Kornyoo Xiyyoo Waliinii
Kornyoo kofa digrii-90n tokko yookin isaa ol waliin jallatuu fi geengoo qabxii xumuraa lamaanii kaasa. Tuqaa cuftii wantaa irratti cuqaasi gara tuqaa cuftii wanta biroo irratti harkisii ittaansuun gadhiisi.
Kornyoo Geengoodhaan jalqabu
Kornyoo Kofa digirii-90n tokko yookan isaa ol jallatuu fi geengoo qabxii xumuuraatti kaasa. Qabxii cuftii wanta irraa cuqaasi, gara qabxii cuftii wanta biroo irratti harkisi, ittaansuudhaan gadhiisi.
Kornyoo Geengoodhaan Xumuuramu
Kornyoo geengowwan waliinii kornyoo kofa digirii-90n tokko yookaan isaa ol jaruu fi geengoo dhuma lamaanii kaasa. Tuqaa cuftii wantaa irratti alqaasi, gara cuftii wanta biroo irratti harkisi, ittaansuudhaan gadhiisi.
Kornyoo Geengoowwan Waliinii
Kornyoo Kofa digirii-90n tokko yookan isaa ol jaruu fi geengoo dhuma lamaanii kaasa. Tuqaa cuftii irratti alqaasi, gara cuftii wanta biroo irratti harkisi, ittaansuudhaan gadhiisi.
Kornyoo tuqaa cuftii cinaatti jallatu kaasa. Tuqaa cuftii wanta irratti cuqaasi, gara qabxii cuftii wanta biroo irratti harkisi, itti aansuudhaan gadhiisi. Dheerina muraa sarara qabxii jallatiin tuqaa cuftii gidduu jiru sirreessuuf karnyoo cuqaasuun, qaphxii jallatiinsaa harkisi, itti aansuun gadhiisi.
Kornyoo Sarara Xiyyaan Jalqabu
Kornyoo xiyyaan jalqabuu fi tuqaa cuftii cinaatti jallatu kaasa. Tuqaa cuftii wantaa irratti cuqaasi,gara qabxii cuftii wantaa irratti harkasi itti aansuudhaan gadhiisi dheerina muraa sarara qabxiin jallatiisaa fi qabxii waaliindhaa gidduu jiru sirreessuuf, kornyoo cuqaasuun qabxii jallatiinsaa harkisi.
Kornyoo Sararaa Xiyyaan Xumuuru
Kornyoo xiyyaan xumuuramuu fi tuqaa cuftii cinaatti jallatu kaasa. Qabxii cuftii irratti cuqaasi, gara tuqaa cuftii wanta biroo irraatti harkaisi, itti aansuudhaan gadhiisi. Dheerina muraa sararaa qabxi jallatiinsaa fi tuqaa cuftii gidduu jiru sirreessuuf cuqaasuun qabxii jallatiinsaa harkisi.
Kornyoo Sararaa Xiyyaa waliinii
Kornyoo tuqaa cuftii cinaatti jallatuu fi dhuma lameen irratti xiyyawwan qaba. Tuqaa cuftii wanta irratti cuqaasi, tuqaa cuftii wantaa biroo irratti harkisi itti aansuudhaan gadhiisi. Dheerina mura sararaa qabxii jallatiinsaa fi tuqaan cuftii gidduu jiru sirreessuuf kornyoo cuqaasii tii qabxii jallatiinsaa harkisi.
Kornyoo Sararaa Geengoo Jalqabu
Kornyoo geengoo jalqabuu fi tuqaa cuftuqaaa cufti cinaatti jallatu kaasa. Tuqaa cuftii wantaa irratti cuqaasi, gara wanta biroo irratti harkisi, itti aansuudhaan gadhiisi.Dheerina mura sarara qabxii jallatiinsaa fi tuqaa cuftii gidduu jiru sirreessuuf, kornyoo cuqaasiiti qabxii jallatiinsaa harkisi.
Kornyoo Sararaa Geengoodhaan Xumuramu
Kornyoo geengoodhaan xumuuramuu fi tuqaa cuftii cinaatti jallatu kaasa. Qabxii cuftii wantoo irratti cuqaasi, gara tuqaa cuftii wanta biroo irratti harkisi, itti aansuudhaan gadhiisi. Dheerina mura sarara qabxii jallatiinsaa fi tuqaa cuftii gidduu jiru sirreessuuf,kornyoo cuqaasuudhaan qabxii jallatiinsaa harkisi.
kornyoo Sraraa Geengoowwaan waliinii
Kornyoo tuqaa cuftii cinaatti jallatuu fi dhuma lameen itti geengowwan qabu kaasa. Tuqaa cuftii wantaa irratti cuqaasii, gara tuqaa cuftii wanta biroo irratti harkisi, itti aansuudhaan gadhiisi. Dheerina mura sararaa qabxii jallattinsaa fi qabxii cuftii gidduu jiru sirreessuuf, kornyoo cuqaasuudhaan qabxii jallatiinsaa harkisi.
Kornyoo sarara qajeelaa kaasia. Tuqaa cuftii wantaa irratti cuqaasi, gara qabxii cuftii wanta biroo irratti harkisi booda gadhiisi.
Kornyoo Qajeelaa xiyyaan Jalqabu.
Kornyoo sarara qajeelaa xiyya waliin ka'uumsa irratti kaasa. Tuqaa cuftii wanta irraa cuqaasi, gara tuqaa cuftii wanta biroo irratti harkisi, booda gadhiisi.
kornyoo Qajeelaa xiyyaan xumuuru.
Kornyoo sarara qajeelaa xiyya waliin xumura irratti kaasa. Qabxii cuftii wanta irraa cuqaasi, gara qabxiii cuftii wanta biroo irratti harkisi, booda gadhiisi.
kornyoo Qajeelaa xiyyoota waliini.
Kornyoo sarara qajeelaa xiyyoota waliin dhuma lameen irratti kaasa. Qabxii cuftii wantaa irratti cuqaasi, gara qabxii cuftii wanta biroo irratti harkisi, booda cuqaasi.
kornyoo Qajeelaa Geengoon Jalqabu.
Kornyoo sararaa qajeelaa geengoo waliin ka'uumsa irratti kaasa. Qabxii cuftii wanta irratti cuqaasi,gara qabxii cuftii wanta biroo irratti harkisi, booda cuqaasi.
kornyoo Qajeelaa Geengoon Xumuuru.
Kornyoo sarara qajeelaa geengoo waliin dhuma irratti kaasa. Qabxii cuftii wanta irratti cuqaasi, gara qabxii cuftii wanta biroo irratti harkisi, booda gadhiisi.
kornyoo Qajeelaa Geengoowwaan waliini.
Kornyoo sararaa qajeelaa geengoo waliin dhuma lameen irratti kaasa. Qabxii cuftii wantaa irratti cuqaasi,gara qabxii cuftii wanta biroo irratti harkisi, booda gadhiisi.
Sarara kornyoo qajeelaa geengoo waliin dhuma lameen irratti kaasa. Qabxii cuftii wanta irratti cuqaasi, gara qabxii cuftii wanta biroo irratti harkisi, booda gadhiisi.
Kornyoo Qonyoo Xiyyaan Jalqabu
Sararaa kornyoo qajeelaa geengoo waliin ka'uumsa irratti kaasa. Qabxii cuftii wanta irratti cuqaasi, gara qabxii cuftii wanta biroo irratti harkisi, booda cuqaasi.
kornyoo Qonyoo Xiyyaan Xumuuru
Kornyoo Qonyoo Xiyyoota waliinii
Sarara kornyoo qajeelaa geengoo waliin dhuma lameeni irratti kaasa. Qabxii cuftii wanta irratti cuqaasi, gara qabxii cuftii wanta biroo irratti harkisi, booda gadhiisi.
Kornyoo Qonyoo Geengoo Jalqabu
Kornyoo Qonyoo Geengooedhaan Xumuuru
Sararaa kornyoo qajeelaa geengoo waliin ka'uumsa irratti kaasa. Qabxii cuftii wanta irratti cuqaasi,garaqabxii cuftii wanta biroo irratti harkisi, booda gadhiisi.
Sarara kornyoo qonyoo qabxii cuftii geengowwan waliin xumuura lameen kaasa. Qabxii cuftii wanta irratti cuqaasi, gara qabxii cuftii wanta biroo irratti harkisi, booda gadhiisi.
Taattoo yaa'aa uumuuf
Title is: Kornyoowwan